मार्ने योजना थाहापाएपछि डराए प्रचण्ड - Dainik Nepal
मार्ने योजना थाहापाएपछि डराए प्रचण्ड
दैनिक नेपाल २०७५ चैत १ गते ६:३४
काठमाडौं, १ चैत । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले आफ्नो हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् ।
‘पछिल्लो चरण मेरो कार्यालयका सचिव भएर बसेका विप्लवले म (प्रचण्ड) लाई नै एक नम्बरमा राखेर मार्नुपर्ने भनेर माइन्युट गर्नुभएको छ रे। टिम पनि खटाउनुभएको छ भन्ने सरकारका तर्फबाट आज बिहान मलाई सूचना दिइयो,’ दाहालले भने, ‘के भएको होला साथीहरूलाई ? मलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्ने हो र ? ’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।